#6 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်စီးပွားရေးသမားဆိုတာအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်းအမှားလုပ်မိတာရှိမှာပါ။ ဒါဆိုရင်အမှားလုပ်မိတဲ့အခါဘာဆက်လုပ်မလဲ? သင့်ကိုယ်သင်ပဲအာရုံစိုက်နေရုံနဲ့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး‌။ ဒါကြောင့် သင် တူညီတဲ့အမှားတွေကို ထပ်မလုပ်မိပဲရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီသောစနစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဟာတစ်စုံတစ်ခုကိုအမြဲမေ့တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Reminder Application ကိုအသုံးပြုတာ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင့်ကိုသတိပေးဖို့အကူအညီတောင်းတာမျိုး စတာတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ရဲ့စွမ်းအားထက်ပိုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Supervisor အများစုဟာ သင့်ရဲ့ပထမအမှားကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် နောက်ထပ်တူညီတဲ့အမှားတွေထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သတိထားပြီးလုပ်ကိုင်တဲ့အရာတွေက သူတို့သင့်ကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါလွှမ်းမိုးလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဆီက သင်အဆူခံရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ? သင်စိတ်ဓါတ်ကျသွားမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒီအခြေအနေဟာ သင်အမှားလုပ်မိတဲ့အခါမှာသာဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်းအဲ့လိုအချိန်မှာသင့်ဘက်ကအကောင်းမြင်ကြည့်ပါ။ သင်ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့ဆင်ခြင်တွေးတောတတ်တဲ့အတွေးတွေပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အမှားတွေထပ်လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး သင်မှားနေတာတွေကိုပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့အမှားတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေကသင့်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့အဓိပ္ပါယ်တွေရှိနေလို့ပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်ဤအတွေ့အကြုံမှသင်ခန်းစာအချို့ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ပျက်ကွက်မှု၌အဓိပ္ပာယ်အချို့ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အဆူခံရပြီးနောက်မှာ သင့်ရဲ့အမှားတွေ, ကျရှုံးမှုတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး အဖြေရှာကြည့်ခြင်းက စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်တန်ဖိုးကိုပိုပြီးမြင့်စေပါတယ်။
[Organizer တစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းဟာ သင့်အတွက်အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်]
ပွဲတစ်ခုရဲ့စီစဉ်သူကို သင်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ? ၎င်းဟာ အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိပုံမပေါ်သော်လည်း Organizer တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်ရန်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Members ရွေးတာ ဒါမှမဟုတ် ပွဲကျင်းပဖို့နေရာရွေးတာတွေက အလုပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက် လူနည်းစုသာပွဲစီစဉ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ကိုလည်း ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တခြားသူတွေမလုပ်ချင်တာကိုသင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ရှည်လျားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် အစောပိုင်းအဆင့်မှာယုံကြည်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ယုံကြည်မှုဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသင်ရဲ့တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ဆိုတာဟာ အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ရည်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းအပေါ်မှာလည်းများစွာမူတည်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားတိုင်းဟာ ကာယနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးရဲ့အရေးကြီးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရရှိဖို့အတွက် အနားယူသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုက လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်ပြီး သင့်တော်တဲ့အိပ်ချိန်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူညီပဲကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုကဟာအနည်းဆုံး ၆ နာရီကျော်အိပ်စက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဟာဘယ်လောက်ပဲငယ်ရွယ်နေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ညဥ့်နက်တဲ့ထိမအိပ်ပဲနေနိုင်ပါစေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအနားယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။